မပြီးဆုံးချင်တဲ့ ကဗျာ | | Colors Rainbow
၂၀၁၉ခုနှစ် International Day Against Homophobia,Trans phobia and Bi-phobia နေ့မှာ ကုမ္ပဏီတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်း Rainbow အလံ လွှင့်တင်မည်
လားရှိုးမြို့တွင် “မြန်မာနိုင်ငံရှိ LGBT အခွင့်ရေးများကို တိုးတက်မှုရှိစေမည့် နည်းဗျူဟာနှင့် နည်းလမ်းကျင့်ဝတ်”စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ
ပဲခူးမြို့ Walks of Life (ဘဝခရီးပြခန်း)ဖွင့်ပွဲကို မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကြက်ခြေနီသူနာပြုတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတွေ တက်ရောက်အားပေးခဲ့
Edify Myanmar ကုမ္ပဏီရဲ့ Co-Founder, Executive Director မရတနာဇော်
June 28, 2018 June 29, 2018 Soe Myat Thu 2015 Views0Comments မှော်ရုံသစ်	min read
“နင်နဲ့ငါ ရှေ့ဆက်ဖို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့တာ ငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါတော့”
တစ်ချိန်ချိန် သူမဆီက ဒီလိုစကားမျိုး ကြားရနိုင်တာသိပေမယ့် တကယ်တမ်း ကြားလိုက်ရတဲ့အခါ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ လိုအပ်တာထက် ပြိုပျက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ သူမရဲ့ဆယ်နှစ်တာ ချစ်ခရီးလမ်းမှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လမ်းခွဲစကားပြောဖူးကြပေမယ့် ဒီတစ်ခါ နောက်ဆုံးပြောခြင်းနဲ့ အတည်အတံ့ ပြောခြင်းဆိုတာကိုလည်း အလိုလိုသဘောပေါက်နေပါတယ်။
“နင်ထင်ချင်သလိုထင်တော့လေ ငါ့ဘက်က အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စောင့်ခဲ့ပြီးပြီပဲ။ ပြီးတော့ နင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လူကဲ့ရဲ့တာတွေ အပြောအဆိုခံရတာတွေကို ငါသည်းမခံနိုင်တော့ဘူး”
“နင်ပြောတော့ အရာရာကို နှစ်ယောက်အတူ ရင်ဆိုင်မယ်ဆို ငါ့ကိုသိပ်ချစ်တယ်ဆို မခွဲနိုင်ဘူးဆို”
“အဲ့ဒါ အရင်တုန်းကတော့ ဟုတ်တယ်။ အခု ငါ့ဘဝရှေ့ရေးအတွက် ငါကြည့်ရတော့မယ်။ နင်က…”
“ဆက်ပြောလေ နင်က… ဘာဖြစ်လဲ”
သူမ ဆက်မပြောနိုင်တဲ့စကားကို ကျွန်တော်ကြားပါတယ်။ နင်က ငါ့ဘဝအတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်လို့လဲဆိုတာမျိုးကနေ နင်က ငါဘာမှအားကိုးလို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာအထိ အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူမကို ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကာကွယ်မပေးနိုင်တာတွေ လူကြားထဲ လူရာဝင်အောင် ရှေ့ထုတ်မပြရဲခဲ့တာတွေ သူမရဲ့ တချို့လိုအင်တွေကို ကျွန်တော်မဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ခဲ့တာတွေ စတာတွေအတွက် ကျွန်တော်အမြဲတမ်း အားငယ်နေတတ်မှန်းသိလို့ သူမ မပြောရက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြံဖန်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။
ငွေကြေးအင်အားတောင့်တင်းမှ ကိုယ်ပိုင်ဘဝတစ်ခုကို ထူထောင်နိုင်မှာမှန်းသိလို့ ကျွန်တော်အမျိုးမျိုး ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကပဲ ညံ့လို့လား၊ ကံကိုကပဲ ဆိုးချင်လို့လား၊ အချိန်ကပဲ နည်းလွန်းလို့လားဆိုတာတော့ ကျွန်တော် မသိနိုင်တော့ဘူး။ “အခုအချိန်မှာ ဘာမှအရေးမကြီးတော့ဘူး၊ ပိုက်ဆံတစ်ခုပဲ အရေးကြီးတော့တယ်” ဆိုတဲ့ သူမရဲ့စကားသံလေးတွေကိုလည်း နားထဲပဲ့တင်ထပ်အောင် ကြားနေရပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်လွန်းအားကြီးပုံများကလည်း ကျွန်တော့် ထူထောင်လက်စလုပ်ငန်းတစ်ခု ပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်ရယ် သူမ အရေးတကြီး ငွေလိုတဲ့အချိန်ရယ်ဟာ တစ်ထပ်တည်း လာကျရသတဲ့။ နဂိုကတည်းက မိန်းကလေးအချင်းချင်း ကြိုက်နေတယ် ယောက်ျားလျာတစ်ယောက်နဲ့ ကြိုက်နေတယ်ဆိုတာကို လူသိမခံဝံ့ခဲ့တဲ့ သူမဟာ ဘဝတိုက်ပွဲနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်ကို လက်လွှတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
“နင် တကယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလား ငါ့ကို ဘယ်တော့မှထားမသွားဘူးဆို”
“အေး ငါ့ကို ကတိမတည်တဲ့ သူတစ်ယောက်လို့သာ သတ်မှတ်လိုက်ပါတော့”
“နင် အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟာ ငါတို့အချစ်က အလွယ်တကူ တည်ဆောက်ခဲ့ရတာ မဟုတ်ဘူးလေ”
“နင်တော်တော် အတ္တကြီးတာပဲ။ ငါ အခု ငါ့မိသားစုစီးပွားရေးအတွက် ဦးဆောင်ရတော့မှာ ကိုယ်တာဝန်မယူနိုင်တဲ့သူကို လွှတ်ပေးလိုက်ပါတော့။ ငါ့ကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါတော့”
သူမရဲ့ ဒေါသတကြီး အော်ဟစ်မှုတွေကြားမှာ ကျွန်တော်တကယ်ကို ဆွံ့အသွားခဲ့ရပါပြီ။ သူမဟာ ကျွန်တော့်ကို အကြင်နာတရားကြီးမားသူ၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကြီးမားသူ၊ အတ္တနည်းလွန်းသူလို့ပဲ အမြဲမြင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ “မောင်ကသိပ် လေးစားဖို့ကောင်းတာပဲ” ဆိုတဲ့ စကားတွေကိုသာ ပြောတတ်တဲ့သူမက အခုတော့ အတ္တကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်း ပြောရက်နေနိုင်ပါပြီ။ ပြီးတော့ လွှတ်ပေးရမယ်တဲ့။ ကျွန်တော်ဟာ သူ့ကို ချုပ်နှောင်ထားတဲ့သူလားဗျာ။ ကျွန်တော့်ကို အနှောင့်အယှက်တစ်ခုလို့ သူမ မြင်နေပါပြီ။ “မောင်” လို့ သူမ မြတ်မြတ်နိုးနိုးခေါ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ကို အရင့်သည်းဆုံး စကားလုံးတွေ ပြောနေနိုင်ပါပြီ။
ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်ပါပြီ။ သူမရဲ့မေတ္တာတရားကို နောက်ထပ်လိုချင်သေးတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လမ်းခွဲပေးလိုက်တဲ့နည်းက အကောင်းဆုံးပဲဆိုတာကို နာနာကျင်ကျင် သဘောပေါက်လိုက်ပါပြီ။ ကျွန်တော့်ကြောင့် ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းတွေရဲ့ ငြိုငြင်ခြင်းကိုလည်း ခံရစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့။ ကျွန်တော် နားလည်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲ သူမကို ပြောလိုက်ပါတယ်။
“အေးပါ နင်ဒီလောက်ခံစားနေရမှတော့ ငါနောက်ဆုတ်လိုက်ပါတော့မယ် အဆင်ပြေအောင်နေနော်”
“ငါလည်း ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုး မဖြစ်ချင်ပါဘူးဟာ”
“ငါ့ကိုဖြတ်တဲ့ အကြောင်းပြချက်က ဒါအကုန်ပဲလား”
“အမေ့ရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားတွေကို မလွန်ဆန်ချင်တော့တာကြောင့်လည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ်”
သက်ပြင်းမောတစ်ချက်ကိုပဲ ကျွန်တော် ရှိုက်ထုတ်လိုက်တော့တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သူမဟာ မိသားစုရဲ့ ငြိုငြင်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်တစ်ယောက်ကို စွန့်လွှတ်နိုင်ရင် တခြားအရာအားလုံးကိုပြန်ရရှိမယ့် အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီ။ ကျွန်တော် ဘယ်လိုအင်အားမျိုးနဲ့ သူမကို ထပ်ဆွဲထားရမှာလဲဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ လိုလူမျိုးတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့သော ချစ်ခြင်းမျိုးတွေကို မစာမနာ ရှုံ့ချလွန်းတဲ့ လူတွေကိုပဲ စိတ်နာနေမိတယ်။ သူမနဲ့ပတ်သက်ရင် ကျွန်တော့်ပါးစပ်က ကျင့်သားရနေတဲ့ စကားပဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
“အေးပါဟာ နင့်ဘဝ ဖြောင့်ဖြူးသာယာလှပပါစေ”
“ငါတို့ သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ် အဆက် အသွယ်ရှိကြဦးမှာလား”
စက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို နှလုံးသားရှိ ဟန်ဆောင်ပြီး သူမ မေးပါတယ်။ ပြတ်သားတဲ့စိတ်ရှိယောင်ဆောင်ပြီး ကျွန်တော်ဖြေဖြစ်တယ်။
“နင့်ရှေ့မှာ ငါ နောက်တစ်ခေါက် ပေါ်လာတော့မယ် မထင်ဘူး”
ကျွန်တော့်စကားအဆုံးမှာ သူမ ပြုံးနေကျ အလှဆုံးအပြုံးကို ပြုံးပြပါတယ်။ သူမရဲ့ နဖူးလေးကိုနမ်းပြီး ကျွန်တော် နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ထွက်ခွာသွားတဲ့ သူမရဲ့ နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်အတောမသတ်နိုင်အောင် ကြေကွဲငိုကြွေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဒဏ်ရာဟာ နှစ်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ မပျောက်ပျက်နိုင်တဲ့ဒဏ်ရာဆိုတာ အလိုလိုသိနေခဲ့ပါတယ်။
“ငါ့ကို နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက် မောင်လို့ခေါ်ပါလား”
“တော်ပါပြီဟာ အဲ့ဒီနောက်ဆုံး တစ်ခွန်းကို အခုမခေါ်ပါနဲ့တော့။ ငါ အကြွေး မှတ်ထားလိုက်တော့မယ်”
ကျွန်တော့်စကားအဆုံးမှာ သူမ ပြုံးနေကျ အလှဆုံးအပြုံးကို ပြုံးပြပါတယ်။ သူမရဲ့ နဖူးလေးကိုနမ်းပြီး ကျွန်တော် နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ထွက်ခွာသွားတဲ့ သူမရဲ့ နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်အတောမသတ်နိုင်အောင် ကြေကွဲငိုကြွေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဒဏ်ရာဟာ နှစ်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ မပျောက်ပျက်နိုင်တဲ့ဒဏ်ရာဆိုတာ အလိုလိုသိနေခဲ့ပါတယ်။ သူမကိုဆုံးရှုံးရတာဟာ ဘဝမှာ ဘာမှမကျန်တော့လောက်အောင် အရာရာကို နှုတ်ယူခံလိုက်ရသလို ဆုံးရှုံးမှုမျိုး ဆိုတာကိုလည်း သူမသိအောင် မပြောပြဖြစ်တော့ပါဘူး။ ရင်ထဲက အက်အက်ကွဲကွဲ ထပ်တလဲလဲနဲ့ စာတိုလေးတစ်ပိုဒ်ကို ရွတ်နေမိတယ်။
“ငါ့ရင်ကို ထက်ခြမ်းခွဲပြီးမှ တည်ဆောက်ထားတဲ့ မင်းဘဝမှာ ပျော်အောင်နေခြင်းဖြင့် ငါ့ကိုကျေးဇူးဆပ်ပါ”
← အပြာကားတွေကပေးတဲ့ ပြဿနာ (၇) ချက်
ရထားပေါ်က ဈေးသည်လေး →
June 29, 2018 Soe Myat Thu 0
June 25, 2018 Kyal Sin Lin 0
May 14, 2019 Kyal Sin Lin0min read
ယခုနှစ် မေလ(၁၇)မှာ ကျရောက်မယ့် International Day Against Homophobia,Trans phobia and Bi-phobia (IDAHOT)နေ့မှာ LGBT တွေရဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးအတွက် ကုမ္ပဏီတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်း Rainbow အလံ လွှင့်တင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Rainbow
May 11, 2019 Kyal Sin Lin0min read
May 3, 2019 Kyal Sin Lin0min read
ဟင်္သာတမြို့မှာ Walks of Life (ဘဝခရီးပြခန်း)ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဖွင့်လှစ်ပြသ
April 23, 2019 Kyal Sin Lin0min read
April 29, 2019 Kyal Sin Lin0min read
Edify Myanmar ကုမ္ပဏီရဲ့ Co-Founder, Executive Director တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်သလို လူငယ်တွေဘဝ တိုးတက်မြင့်မားဖို့ ဟောပြောပို့ချနေသူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ စွန့်ဦးတီထွင် အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင် မရတနာဇော်ကို LGBT လူငယ်တွေကို အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာဖို့ မိမိကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်သင့်တဲ့ ဆောင်ရန်၊
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ထွက်ရှိခဲ့သော LGBT ဇာတ်ကားများ
June 29, 2018 Soe Myat Thu0min read
ရုပ်ရှင်အညွှန်းကဏ္ဍမှာ အရင်လတွေတုန်းက တစ်ကားဆိုတစ်ကား ဝေဝေဆာဆာလေး ဖော်ပြပေးရာကနေ အသစ်အဆန်းနဲ့ ရသတွေ ပိုစုံနိုင်အောင်လို့ ဇာတ်ကားခပ်များများလေးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖော်ပြတဲ့ နေရာမှာလည်း စိတ်ကူးအသစ်လေးတွေ ကွန့်မြူးနိုင်အောင်လို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလေးတွေကို အက္ခရာစဉ်အတိုင်းစီပြီး
မန္တလေးမြို့တွင် LGBT များ၏ အမှုအခင်းကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးမည့် ဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့များ လိုအပ်နေ
July 3, 2018 admin2Comments min read
ခံတွင်း-ပါးစပ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ (Common Oral Mucosal Lesions)
March 22, 2016 admin 1 Comment min read
May 9, 2016 admin 1 Comment min read
LGBT လူငယ်အချင်းချင်းကြား သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဖလှယ်နိုင်မယ့် စကားဝိုင်းကို တစ်လတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သွားမယ်
June 5, 2018 Kyal Sin Lin 1 Comment min read
LGBT တွေဟာလည်း လူထဲက လူပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူတွေ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတောင်းဆိုတာကို အားပေးထောက်ခံရုံမက လက်တွဲ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့လည်း အဆင်သင့်ပါပဲလို့ တနင်္သာရီအစိုးရ လူမှုရေးနဲ့ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးက ပြောကြား
May 19, 2018 admin 1 Comment min read
သာကေတမြို့နယ်တွင် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ LGBT အခွင့်အရေးအကြောင်း Colors Rainbow က သင်တန်းပြုလုပ်
June 11, 2018 Kyal Sin Lin 1 Comment min read
May 14, 2019 Kyal Sin Lin min read
May 11, 2019 Kyal Sin Lin min read
May 3, 2019 Kyal Sin Lin min read
April 30, 2019 Kyal Sin Lin min read
April 29, 2019 Kyal Sin Lin min read
April 25, 2019 Kyal Sin Lin min read
Thazin Phoo Wai says:
I 'm lgbt like it is very simply 😁...
Hnin Yi Soe says:
I'm proud of u....
Minister of Social Affairs and Municipal, Tanintharyi Regional Government ready not only to support but to cooperate to demand for suitable rights as LGBTs are people among people - Colors Rainbow says:
[…] Source: www.colorsrainbow.com […]...
Hundres of students eagerly attended seminar about LGBT held at Dagon University - Colors Rainbow says:
LBGT gathering to share information to be hosted every month - Colors Rainbow says:
Training on LGBT rights organized by Colors Rainbow at Thaketa Township - Colors Rainbow says:
Colors Rainbow Magazine is being run by LGBT Organization called Colors Rainbow located in Yangon, Myanmar, with the purpose of being social changes and legal reforms in Myanmar.
The magazine more emphasize on making the awareness of international LGBT movements and anti-discrimination base on sexual orientation, gender identity and gender expression.
In addition, the printed magazines are also being published bi-monthlyayear. It is free distribution around the country in the collaboration with LGBT Rights Network (Myanmar),
The Network covers 13 areas (regions) in Myanmar. It was established since 2013, combined with LGBT organizations and individuals LGBT advocates around Myanmar to combat for equality and legal reform.
&PROUD AIDS Alex Aung beauty Behaviorism Born christian Civic Engagement Colors Rainbow Dawei Depression equality gay gender identity health HIV homosexuality human rights hygiene IDAHOT Indonesia intersex Interview islam LGBT LGBT Rights lifestyle malaysia Mandalay movie Myanmar Myat Maw Oo Naung Cho Thit poem pride month public health Same sex Marriage Sexual Transmitted Diseases SOGIE Transgender Walks of life ကြယ်စင်လင်း စံပြတင်ဦးကျော် (တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ) ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ဝိုင်
Copyright © 2019 Colors Rainbow. All rights reserved.